Imisa Dumar Ah Ayuu Qabay Hogaamiyihii Cuba Fidel Castro? – Xeernews24
29. November 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Dumarkii uu ka tagay hoggaamiyihii hore ee Cuba ee dhawaan dhintay Fidel Castro ayaa la sheegay inay dhan yihiin qabiilo dhan tiro waxay ka qabaan. Castro ayaa ahaa nin taariikh dheer ku leh qarnigii tagay ee 20aad.
Waa marka laga hadlaayo dhanka siyaasada caalamka iyo taageeradii uu taageersanaa nidaamka shuuciga.
Laakiin warar soo baxay ayaa sheegay in uu xagga dumarka uu aad ugu xeel dheeraa sidoo kale. Wuxuu aad u jeclaa dumarka xataa markii uu dhallinyarada ahaa ee uu soo jabhadeynayay.
Waa uu dumar badnaa xataa ilaa laga soo gaadho geeridiisii Jimcihii aanu soo dhaafnay asagoo ku dhintay da’da 90 sano jirka.
Dadka qaarkii ayaa sheegaya inuu lahaa kumanaan dumar ah. Wargeyska New York ayaa sheegay inuu lahaa tobanaan kun oo haween ah gaar ahaan 35,000.
Wargeyskaa ayaa sidaa sheegay sanadkii 2008 cadadka intaa dhan oo dumar ah oo xogteeda laga helay sarkaal dawlada Castro ka tirsanaa.
Gabadh wariye ah oo lagu magacaabo Ann Louise Bardach ayaa sanadkii 2009 ku qortay buug in Castro uu u sheegay inuu dhalay carruur dhan qabiilo dhan iyana! Waxaa la sheegay inuu aad u jeclaa dumarka Jarmalka iyo Italy kazoo jeeda gaar ahaa sanadihii lixdameeyadii iyo kontonmeeyadii.
Si kastaba ha ahaatee carruurtiisa ayaa la sheegay inta aan la aqoon in ciida ay ka badan yihiin. Inta uu dhalay ee la yaqaan ayaa Cuba kunool ayagoo aad aan loo tusin balse laga ilaasho warbaahinta si aysan wax uga qorin.
Is qab qabsi iyo dood ka taagan ergadii dooran laheyd Xildhibaanada Gobolada... Diyaarad Sidday Cayaartoy oo Burburtay + [Sawiro]